Ịmụta Eziokwu Baịbụl na Frans
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
MGBE Antoine Skalecki bụ nwa okoro, o nwere ịnyịnya ya na ya na-eso aga ebe ọ bụla ọ na-aga. Ha abụọ na-esi n’ebe a na-egwute kol n’ime ala dọkpụrụ kol gbagote. Isi n’ebe ahụ gbagote dị ọkara kilomita, ọ na-agbatụkwa ọchịchịrị. Papa Antoine merụrụ ahụ́ n’ebe ahụ a na-egwute kol mgbe ebe ahụ zere. Ọ bụ ya mere ndị ezinụlọ ha ji dunye Antoine ka ọ gaa rụwa ọrụ n’ebe ahụ awa itoolu n’ụbọchị. E nwere otu mgbe Antoine gaara anwụ n’ebe ahụ a na-egwu kol mgbe ebe ahụ zere ọzọ.
Ngwá ọrụ ndị Poland ji gwuo kol nakwa ebe a na-egwu kol na Dechi, dị nso na Sin-le-Noble, bụ́ ebe Antoine Skalecki rụrụ ọrụ
Antoine so n’ọtụtụ ụmụaka a mụrụ na Frans n’agbata afọ 1921 na 1939, ma nne ha na nna ha bụ ndị Poland. Gịnị mere ndị Poland ji gaa Frans? Mgbe a lụchara Agha Ụwa Mbụ, Poland achịwakwa onwe ha, nsogbu e nweziri bụ na ndị mmadụ karịrị akarị na Poland. Ma, agha ahụ tara isi ihe karịrị otu nde ụmụ nwoke ndị Frans, mezie ka a na-achọ ndị ga na-egwu kol na Frans. N’ihi ya, n’ọnwa itoolu n’afọ 1919, ndị ọchịchị Frans na Poland kwekọrịtara ka ụfọdụ ndị Poland bịa biri na Frans. N’afọ 1931, ndị Poland bi na Frans eruola narị puku ise na asaa, na narị asatọ. Ọtụtụ n’ime ha bicha n’ebe a na-egwute kol n’ebe ugwu.
Ndị Poland ndị ahụ bu omenala ha bịa Frans, ma ha na-arụsi ọrụ ike. Ha anaghịkwa eji ihe gbasara okpukpe egwu egwu. Antoine dị afọ iri itoolu ugbu a. Ọ sịrị: “Aha papa mama m bụ Joseph. Otú o si ekwu banyere Akwụkwọ Nsọ gosiri na o jighị ya egwu egwu. Ọ bụ ihe ọ mụtara n’aka papa ya.” Ụbọchị Sọnde ọ bụla, ndị Poland ahụ na-arụ n’ebe a na-egwu kol na ndị ezinụlọ ha na-eyi ọmarịcha uwe ha gaa chọọchị, otú ha na-eme n’obodo ha. Ma, ndị Frans ike chọọchị gwụrụla na-ele ha anya ka ndị iberiibe.
Ebe mbụ ọtụtụ ndị Poland bí na Frans hụrụ Ndị Mmụta Baịbụl bụ n’ebe a na-akpọ Nord-Pas-de-Calais. Ụmụnna ndị ahụ ji ịnụ ọkụ n’obi na-ekwusa ozi ọma n’ebe ahụ kemgbe afọ 1904. A malitere ibipụta Ụlọ Nche kwa ọnwa n’asụsụ Polish n’afọ 1915, malitekwa ibipụta Teta! n’asụsụ ahụ n’afọ 1925. Ọtụtụ ezinụlọ nabatara eziokwu Baịbụl e dere na magazin ndị ahụ nakwa akwụkwọ bụ́ The Harp of God n’asụsụ Polish.
Nwanne mama Antoine gara ọmụmụ ihe mbụ ya n’afọ 1924. Ọ bụ ya mere ka Antoine na ndị ezinụlọ ha mata Ndị Mmụta Baịbụl. Ọ bụkwa n’afọ ahụ ka Ndị Mmụta Baịbụl nwere mgbakọ mbụ ha n’asụsụ Polish n’obodo Bruay-en-Artois. N’ihe na-erughị otu ọnwa, Nwanna Joseph F. Rutherford, bụ́ onye nnọchianya isi ụlọ ọrụ anyị, bịara obodo ahụ. Ndị gere okwu ya dị puku abụọ. Mgbe Nwanna Rutherford hụrụ na ọtụtụ ndị bịara ebe ahụ bụ ndị Poland, ọ sịrị ha: “Jehova kpọtara unu Frans ka unu mụta eziokwu. Unu na ụmụ unu ga-enyeziri ndị Frans aka. A ka ga-ekwusara ọtụtụ ndị ozi ọma. Jehova ga-eme ka e nwee ndị ga-ekwusa ya.”
Jehova Chineke mere otú ahụ. Ụmụnna ndị Poland ahụ ji obi ha niile na-ekwusa ozi ọma otú ha ji obi ha niile na-egwu kol. Ụfọdụ n’ime ha laghachidịrị Poland ka ha gaa kụziere ndị obodo ha eziokwu ha mụtara. Teofil Piaskowski, Szczepan Kosiak, na Jan Zabuda so ná ndị hapụrụ Frans gaa ikwusa ozi ọma n’ọtụtụ ebe na Poland.
Ma, ọtụtụ ụmụnna ndị Poland nọọrọ na Frans, soro ụmụnna ndị Frans na-ekwusasi ozi ọma ike. Ná mgbakọ e mere n’afọ 1926 na Sin-le-Noble, ndị bịara nke e mere n’asụsụ Polish dị otu puku, ndị bịara nke French adịrị narị atọ. Akwụkwọ Mgbaafọ 1929 nke Bekee kwuru, sị: “N’ime afọ a, e mere ụmụnna ndị Poland dị́ narị atọ na iri atọ na abụọ baptizim iji gosi na ha enyefeela Chineke onwe ha.” Tupu Agha Ụwa nke Abụọ amalite, e nwere ọgbakọ iri asatọ na anọ na Frans. Iri atọ na abụọ n’ime ha ji asụsụ Polish amụ ihe.
Ụgbọala bú ụmụnna ndị Poland bi na Frans aga mgbakọ. Ihe e dere n’ahụ́ ya bụ “Ndịàmà Jehova”
N’afọ 1947, ọtụtụ ụmụnna laghachiri Poland mgbe ndị ọchịchị gwara ndị obodo ha lọta. N’agbanyeghị na ha lara, mbọ ha na ụmụnna ndị Frans gbara mere ka ọnụ ọgụgụ ndị nkwusa nọ na Frans rịa elu n’afọ ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị nkwusa rịkwuru elu nke ukwuu malite n’afọ 1948 ruo n’afọ 1950. N’afọ 1948, alaka ụlọ ọrụ dị́ na Frans họpụtara ndị nlekọta sekit ka ha nye aka zụọ ndị nkwusa ọhụrụ ndị ahụ. A họpụtara ndị nlekọta sekit ise. Anọ n’ime ha bụ ndị Poland. Antoine Skalecki bụ otu n’ime ha.
Ọtụtụ Ndịàmà Jehova nọ na Frans ka na-aza aha ndị nna nna ha bụ́ ndị Poland, bụ́ ndị gbasiri mbọ ike ma n’ebe a na-egwu kol ma n’ikwusa ozi ọma. Taakwa, ọtụtụ ndị sí mba dị iche iche na-amụta eziokwu na Frans. Ma ndị nkwusa sí mba ọzọ hà laghachiri obodo ha ma hà nọ na Frans, ha ji obi ha niile na-ekwusa ozi ọma otú ahụ ụmụnna ndị Poland bu ha ụzọ bịa mere.—Ihe sí n’ebe anyị na-edebe ihe ochie na Frans.